> Resource> Utility> Bara Uru Way Iji nyere gị aka Idozi Windows Blue ihuenyo na buut
Ọ bụrụ na ị nwetara-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo mgbe ị buut kọmputa gị, ị ga-amarakwa na ọ na-emekarị pụtara na e nwere ihe oké njọ gị usoro. -Acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut nwere ike mere site ọtụtụ ihe mere, dị ka ngwaike ị arụnyere kere a esemokwu, a virus messed elu ndekọ, ma ọ bụ ma eleghị anya, a ọkwọ ụgbọala faịlụ bụ rụrụ arụ. Ebe a, isiokwu a na-aga na-eje ije gị site ole na ole nzọụkwụ na ị pụrụ ime iji troubleshoot a bluescreen na buut.
Otú ndozi-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut
Buut ke mma mode
Ihe kacha ụzọ bụ buut kọmputa gị na Nchekwa na mode, ma ọ bụrụ na ị na-apụghị buut ọ kwesịrị. Press F8 mgbe ị na-amalite na kọmputa na-aga Control Panel, na ịpị System, na mgbe ahụ Ngwaọrụ Manager. Na-aga site ọ bụla na ngwaọrụ Atiya na ike iṅomi niile nke ngwaọrụ maka telltale odo ngwoolu icon na-egosi na e nwere ihe a na ngwaọrụ esemokwu. Ọ bụrụ na nke a adịghị aka, na-agba a dum Doppler maka usoro.
Buut na a bootable CD / USB mbanye
Ọ bụrụ na ahụ dum usoro iṅomi bụkwa a nwụrụ anwụ ọgwụgwụ, ị nwere ike idozi nke a-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut na a ọkachamara ngwá ọrụ, dị ka Wondershare LiveBoot buut CD / USB, nke na-enye gị a kpere ọcha usoro gburugburu ebe obibi na-enye gị ohere troubleshoot-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na nkeji, ọ bụghị dị ka otú mgbagwoju anya dị ka ị na-eche.
Ịzụta usoro ihe omume, ị ga-enweta a aha koodu na a download njikọ. Mgbe ahụ ibudata na wụnye ya na ezi-na-arụ ọrụ na kọmputa. Wee soro nzọụkwụ n'okpuru ike gị bootable CD ma ọ bụ USB mbanye na idozi gị-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut na 3 nzọụkwụ.
Step1: 1 Pịa ike a bootable CD / USB mbanye
Nke mbụ niile, kwadebe ide CD ma ọ bụ USB mbanye, nkwụnye ya n'ime na kọmputa na-agba ọsọ ahụ Wondershare LiveBoot 2012. Na ọkachamara interface dị ka ndị na, họrọ a kwesịrị ekwesị bootable CD / USB eke ndu na pịa green ọkụ bọtịnụ. Ị nwere ike nweta a bootable CD / USB mbanye ke sekọnd ole na ole.
Step2: buut kọmputa gị na bootable CD / USB
Ugbu a, ị na-na na nzọụkwụ nke abụọ. Tụgharịa na kọmputa nke ihe ị a-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut. Fanye bootable CD / USB mbanye n'ime kọmputa na Malitegharịa ekwentị ya. Mgbe Windows ọkọlọtọ amama, pịa F12 ozugbo gaa buut Ngwaọrụ NchNhr. Wee họrọ "onboard ma ọ bụ USB CD-ROM Drive". Mgbe mgbe, ị ga-enweta otu nhọrọ dị ka ndị na. Pịa "buut si LiveBoot" ga-esi n'ime kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Idozi-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut
The bootable CD / USB mbanye na-eduga gị ga-esi n'ime a tupu arụnyere usoro, n'okpuru nke ị nwere ike na-arụ ọrụ ka nkịtị. Ọfọn, ihe mbụ bụ idozi-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut. Nke a bụ ihe anyị kwesịrị ime ugbu a. Gbaa ndị Wondershare LiveBoot 2012, na-akpali ndị "Windows Iweghachite", họrọ "Loading Crash Ngwọta". Ebe a bụ ngwọta zuru ezu n'ihi na gị-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo njehie. Soro usoro egosipụta n'okpuru na-agbaso na-tụọ idozi-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo na buut ugbu a.
Linux Disk nkebi ma Format
Olee otú nkebi a na diski ike na Disk nkebi Manager
Olee otú dezie wdg Files